विज्ञका कुरा पढ्नुहोस् : सोचेकै मितिमा बच्चा कसरी जन्माउने, चरम मज्जा कसरी लिने – Jagaran Nepal
काठमाडौं । म एक २८ वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । मेरो बिहे भएको ३ बर्ष भयो । मेरो श्रीमती र म व्यस्त कार्यतालिकाको कारण हप्तामा एक पटक सम्बन्ध कायम गर्छौं ।मेरी श्रीमतीलाई लाग्छ कि हामी एकदम कम सम्बन्ध कायम गरिरहेका छौं। अब उनी गर्भधारण गर्न चाहान्छिन्, यो विषयमा हामीहरु धेरै बहस गर्छौं ।कृपया मलाई भन्नुहोस् हप्तामा कति पटक सम्बन्ध राख्नुपर्छ ? यसको सामान्य मापदण्ड के हो ?
डा. अशोक गुप्ताको जवाफ : हामी सबै चाहन्छौं कि हाम्रो वैवाहिक जीवन सुखमय होस् । त्यसका लागि हामी धेरै प्रयासहरु गरिरहेका हुन्छौं । तर अझै पनी धेरैजसो मानिसहरु पति वा पत्नीको बारेमा आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई लिएर गुनासो गर्छन् ।
वास्तवमा, हामी एक सुखी वैवाहिक सम्बन्धका लागि चाहिने (सम्मान, भरोसा र प्रेम) को तीन मुख्य सिद्धान्त बिर्सन्छौं । यस बाहेक, एक जोडीको जीवनमा प्रेमको सबैभन्दा ठूलो आधार भौतिक शुःख पनि हो ।
कतिपय मानिसहरु विश्वास गर्छन् कि हप्तामा एक वा दुई पटक मात्र सम्बन्ध राख्नु काफी हुन्छ, जबकि कोहि मान्छन् कि महिनामा एक वा दुई पटक पर्याप्त हुन्छ ।
सबैको विचार फरक छ, त्यसैले यो कुनै पनी सार्वभौमिक स्तर वा गणनाको दायरामा पर्नु राम्रो हुँदैन । तपाईं सम्बन्ध अनुसार सन्तुष्टि चाहानुहुन्छ । किनभने भौतिक शुःखको आनन्द संख्या भन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण छ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा यो होईन कि कस्ले कति पटक सम्बन्ध राख्छ, मुल कुरा के हो भने उसले कसरी गर्छ, कती सन्तुष्टि सो समयमा प्राप्त गर्दछ । वास्तविकतामा, भौतिक शुःखको अर्थ बराबर आनन्द वा समान आनन्द हो ।
दुबै जनाले यो कार्यबाट समान खुःशी प्राप्त गर्नु पर्छ । भौतिक शुःखबाट प्राप्त हुने सन्तुष्टिलाई अन्य गतिविधिहरुबाट प्राप्त हुने खुःशीसंग तुलना गर्न सकिदैंन। त्यो त्यस्तो परम आनन्द हो जहाँ दुई मानिसहरु सँगै सन्तुष्ट हुन्छन् । तर एक साथ दुई जना चरम शुःखमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यक छैन ।
महिला र पुरुषले के कुरा बुझ्न आवश्यक छ भने भौतिक शुःखमा चरम सन्तुष्टिका लागि हतार गर्नुहुँदैन् । एक मायालु स्पर्शबाट त्यस प्रक्रियालाई शुरू गर्नुहोस् ।
विस्तारै एक अर्कासँग समर्पित भएर एक अर्कालाई शारीरिक र मानसिक रुपमा तयार गर्नुहोस् ताकि तपाईं त्यसको भरपुर आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ । थप प्रक्रियाको धेरै महत्त्वपूर्ण छ । मायालु शब्दहरु र स्पर्शबाट तपाईं पूर्णतया सम्बन्धका लागी आफ्नो साथीलाई तयार गर्न सक्नुहुन्छ ।
थप क्रियाकलाप लामो समयसम्म दोहोर्याउन सकिन्छ । यो तपाईंलाई पनी अधिक सन्तुष्टि प्रदानको लागि तयार छ । तपाईंले भौतिक शुःख पाउनुहुनेछ ।
यो संगै, तपाईंको साथिलाई मनपर्ने भौतिक सम्बन्धका नयाँ स्थितिहरु कोसिस गर्न प्रयास गर्नुहोस्, किनकि यो प्रक्रिया शारीरिक भन्दा भावनात्मक हुन्छ । गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध, अधिक सन्तोषजनक शारीरिक सम्बन्ध हुनेछ । भौतिक शुःख कहिल्यै गम्भीर चरणमा सुरु हुन सक्दैन ।
यसलाई शुरु गर्नका लागि राम्रो र रमाईलो कुराहरु गर्नुहोस् । त्यसरी विस्तारै दिमाग र वातावरण दुबै राम्रो हुन थाल्छ । प्रेमपूर्वक जिस्केर आफ्नो साथीसंग कुरा गर्नुहोस्, तब पूरा आनन्द लिन सक्नुहुन्छ ।